Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland, ayaa kulan deg deg isugu yimid Xaruntooda Magaalada Garoowe – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Puntland, ayaa kulan deg deg isugu yimid Xaruntooda Magaalada Garoowe, waxaana shirka furay oo shir Guddoominaayay Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Puntland.
Markii la furay kulanka Baarlamaanka, ayaa Xildhibaanada waxa ay guda galeen cod u qaadista Mooshinkii laga keenay Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland ee iscasilay, waxaana cod u qaadis kadib ogolaatay Mooshinka 47 Xildhibaanoo HAA ku cadeysay, labo waa ay diideen halna wuu ka aamusay.
Intii kulanka Baarlamaanka Xildhibaanada Puntland uu socday, ayaa sidoo kale waxa ay cod u qaadeen Iscasilaada Guddoomiyihii Baarlamaanka.
Xildhibaanadu waxay cod u qaadeen Iscasilaada Gudoomiye Saciid Xasan Shire iyo xubintiisa Xildhibaanimada oo uu iska casilay waxaana Ogolaaday iscasilaada 45 Xildhibaan halka ay diideen 5 xildhibaan.
Baarlamanka Puntland, ayaa looga fadhiyaa in uu soo doorto Guddoomiye cusub oo uu yeesho Baarlamaanka Puntland, maadaama Guddoomiyihii hore saaka uu iscasilay.
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) weli kama uusan hadlin iscasilaada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire uu saaka ku dhawaaqay.
Mooshinka codka ay u qaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa ku qornaa qodobo eedeymo ah oo loo jeediyay Guddoomiyihii Iscasilay.